तपाईंलाई थाहा छ, गुप्ताङ्गको रौँले कति काम गर्छ ? - अखबार पाटी
तपाईंलाई थाहा छ, गुप्ताङ्गको रौँले कति काम गर्छ ?
समाचार डेस्क १२ आश्विन २०७७, सोमबार २१:३८
असोज १२, अखबारपाटी ।
तपाईंलाई गुप्ताङ्गमा अनावश्यक रौँ किन आउँछ भन्ने लागेको हुनसक्छ । कतिपयले त सफा राख्नका लागि खौरने गरेको समेत बताउँछन् । तर, चिकित्सकहरुले गुप्ताङ्गलगायत शरिरको विभिन्न भागमा आउने रौँको आआफ्नै काम र महत्व भएको बताएका छन् ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिम्खडा गोप्य अंगको रौँका विषयमा भन्छिन्, रौं आवश्यक भएका कारण नै आएको हो । रौंले अनावश्यक व्याक्टेरियाहरु भित्र जान दिँदैनन् । साथै, यसले गुप्ताङ्गलाई आवश्यक न्यानो प्रदान गर्छ । यसबाहेक पनि रौंले धेरै प्रकारबाट गुप्तअंगको सुरक्षा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
तर, कतिपय मानिसहरु लिंग वा योनीको वरपर आउने रौँका कारण दुर्गन्ध आउने भएका कारण खौरने गरेको बताउँछन् । तर, डा. सिम्खडा भने खौरनु भन्दा दैनिक सफा गर्नु नै उचित हुने बताउँछिन् । हामी दिनमा कयौँ पटक शौचालय गइरहेका हुन्छौ, त्यसबेला सफा पानीले धोएर सुख्खा कपडाले पुछिदिने हो भने दुर्गन्ध आउने समस्या पनि हुँदैन, उनले भनिन् ।
कतिपयले दुगन्र्ध हटाउन विभिन्न प्रकारका बास्नादार वस्तुको प्रयोग समेत गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, त्यसो गर्दा पनि केमिकलका कारण झनै संक्रमणको जोखिम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. गणेश दंगाल कम उमेरमा विवाह हुनु, धेरै जनासँग यौनसम्पर्क राख्नु, कम उमेरबाटै धेरै बच्चा पाउनु, यौनाङ्गको सरसफाइ नगर्नु, यौनरोग एवं गुप्ताङ्ग सम्बन्धी दीर्घरोगी हुनु पाठेघरको मुखमा क्यान्सर लाग्नाका कारण बताउँछन् ।
त्यसो त आँखी भौँ, परेला, कान, नाकको प्वालमा हुने रौँ आदिको पनि आआफ्नै काम हुन्छन् । आँखी भौँले निदारबाट झर्ने पसिना पानी आदिलाई दायाँ बाँयाबाट तर्काउन मद्दत गर्छन् । यी अंगका रौँले फिल्टरको काम गरेर विकारका वस्तुहरु शरिर भित्र प्रवेश गर्न नदिने चिकित्सकहरुको तर्क छ ।